AMBOARY NY FIDIRANA VOAFETRA NA TSY MISY FIFANDRAISANA WIFI AMIN'NY WINDOWS 10 - MALEMY
Amboary ny fidirana voafetra na tsy misy fifandraisana WiFi amin'ny Windows 10
Raha tambajotra WiFi no manana 'Fifandraisana voafetra' sonia eo akaikiny, midika izany fa mifandray amin'ny tamba-jotra ianao nefa tsy manana fidirana amin'ny Internet. Ny antony lehibe mahatonga an'ity olana ity dia ny tsy fandraisan'ny mpizara DHCP. Ary rehefa tsy mamaly ny mpizara DHCP dia manome adiresy IP ho azy ny solosaina satria tsy afaka nanendry ny adiresy IP ny mpizara DHCP. Noho izany ny Hadisoana ‘voafetra na tsy misy fifandraisana’.
Amboary ny fidirana voafetra na tsy misy olana amin'ny fifandraisana WiFi
Fomba 1: Mihazakazaha troubleshooter an'ny Network
Fomba 2: Avereno ny TCP / IP
Fomba 3: ovao ny fikirakirana firewall Bitdefender (na ny Antivirus Firewall anao)
Fomba 4: Manova ny toerana anaovana adaptatera
Fomba 5: Mifohaza ny adaptatera Wi-Fi anao
Fomba 6: Mampiasà Google DNS
Fomba 7: Avereno ny TCP / IP Auto-tuning
Fomba 8: Alefaso ny fampidinana amin'ny fifandraisana metatra
Fomba 9: Apetraho amin'ny faran'ny farany ambony indrindra ny fahatezerana
Fomba 10: havaozy ny mpamily
1. Kitiho havanana amin'ny kisary tambajotra eo amin'ny biraon'ny lahasa ary kitiho ny Mamaha olana.
2. Hisokatra ny varavarankely Diagnostics Network . Araho ny torolàlana eo amin'ny efijery hampandehanana ilay Troubleshooter.
1. Kitiho havanana amin'ny bokotra Windows ary safidio Command Prompt (Admin).
2. Soraty ity baiko manaraka ity: netsh int ip reset c: resetlog.txt
3. Raha tsy tianao ny mamaritra ny làlan'ny lahatahiry dia ampiasao ity baiko ity: netsh int ip reset resetlog.txt
ny fomba fanilihana ny trackpad rehefa mifandray ny windows Windows 10
4. Atsaharo ny PC.
1. Sokafy ny fikirana amin'ny Bitdefender Internet Security ary safidio Firewall.
2. Tsindrio ny Fikirana mandroso bokotra
3. Hamarino tsara izany Alefaso ny fizarana fifandraisana Internet nozahana.
FANAMARIHANA: Raha tsy manana ilay toe-javatra etsy ambony ianao dia alefaso Sakano ny fizarana fifandraisana Internet fa tsy etsy ambony.
4. Kitiho ny bokotra OK raha te hitahiry fanovana.
varavarankely niraikitra tamin'ny efijery fandraisana
5. Ary raha tsy mandeha izany dia andramo ny mampandeha ny Antivirus Firewall anao ary mamela Windows Firewall.
Ho an'ny olona ambony indrindra manova ny fikirana firewall dia manamboatra ny fidirana voafetra na tsy misy olana amin'ny fifandraisana WiFi, fa raha tsy nety ho anao io dia aza manary fanantenana fa mbola lavitra ny lalan-kalehantsika, ka araho ny fomba manaraka.
1. Sokafy ny Bitdefender, dia safidio Modely fiarovana ary tsindrio ny Endri-javatra Firewall.
2. Hamarino tsara fa nirehitra ny Firewall ary avy eo mandehana mankany amin'ny Adapters kiheba ary tanteraho ireto fanovana manaraka ireto:
3. Atsaharo ny PC-nao hampihatra ireo fanovana ireo.
1. Tsindrio havanana eo amin'ny kisary tambajotra ao amin'ny faritra fampandrenesana ary safidio Misokatra Fikirana Network & Internet.
2. Under Ovay ny fikirakiran'ny tamba-jotra , kitiho eo Hanova Safidy adaptatera.
3. Tsindrio ny Tambajotra WiFi ary safidio Fananana.
4. Ao amin'ny Toetoetra WiFi tsindrio eo Configure.
5. Mandehana any amin'ny kiheba fitantanana herinaratra ary esory ny check Avelao ny solosaina hamono ity fitaovana ity mba hitsimbinana herinaratra.
6. Atsaharo ny PC-nao.
1. Mandehana mankany amin'ny anao indray Toetoetran'ny Wi-Fi.
2. Safidio izao Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) ary tsindrio Fananana.
3. Jereo ilay efajoro hoe Ampiasao ireto adiresy mpizara DNS manaraka ireto ary ampidiro izao manaraka izao:
4. Tsindrio OK raha tehirizina, avy eo tsindrio ny akaiky ary haverina velomina ny PC-nao.
ny fizarazarana mavitrika ankehitriny dia voahidy
2. Soraty ireto baiko manaraka ireto:
3. Atsaharo ny PC-nao.
1. Tsindrio ny Kitendry Windows ary safidio Fikirana.
2. Ary ao amin'ny toe-javatra dia tsindrio Tambajotra sy Internet.
3. Eto no hahitanao Safidy mandroso , kitiho eo.
4. Hamarino tsara fa Ny fifandraisana metatra dia napetraka amin'ny ON
5. Mamerina mamerina mampihatra fanovana.
Ie, ekeko fa dingana tsy misy dikany ity fa hey ho an'ny olona sasany dia nahomby izy io ka maninona raha andramana ary iza no mahalala ny anao fidirana voafetra na tsy misy fifandraisana WiFi azo amboarina.
Fomba 9: Apetraho amin'ny faran'ny farany ambony indrindra ny fidirana an-tsokosoko
ny varavarankely tsy afaka misokatra manampy mpanonta. ny serivisy fanontana printy eo an-toerana dia tsy mandeha
3. Safidio izao ny Wifi ary tsindrio eo Fananana.
4. Ao anaty trano Wi-Fi dia kitiho eo Configure.
5. Mizotra mankany ny kiheba mandroso ary tadiavo ny Fahasosehana amin'ny roaming fametrahana.
6. Ovao ny sanda avy amin'ny Medium mankany amin'ny avo indrindra ary tsindrio OK.
tsy mamaly ny mpizara proxy voalamina
7. Mamerina mamerina mampihatra fanovana.
1. Tsindrio ny bokotra Windows + R ary soraty devmgmt.msc ao anaty boaty fifampiresahana Run to open the mpitantana Fitaovana.
2. Manitatra Adaptatera tambajotra , avy eo tsindrio havanana amin'ny anao Controller Wi-Fi (ohatra Broadcom na Intel) ary safidio Vaovao farany ny mpamily.
3. Ao amin'ny Windows Update Driver Software, safidio Mikaroha rindrambaiko mpamily.
4. Safidio izao Aleo aho haka ao amin'ny lisitry ny mpamily fitaovana amin'ny solosainako.
5. Andramo manavao ireo mpamily avy amin'ireo kinova voatanisa.
6. Raha tsy mandeha ilay voalaza etsy ambony dia mandehana mankany amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra hanavao ny mpamily: https://downloadcenter.intel.com/
Ny fomba fanamboarana Ethernet dia tsy manana hadisoam-panovana IP mety
Ny fomba fanamboarana ny fahafaha-manao Wireless dia maty (Matetika ny radio)
Amboary ny fampirimana ampiasaina Tsy mety vita ny hetsika Error
Ahoana ny fomba hanamboarana ny bokotra Eny voafafy ao amin'ny User Account Control
Manantena aho fa amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy nisy fomba iray niasa mba hanamboaranareo fidirana voafetra na tsy misy fifandraisana WiFi. Raha mbola manana fanontaniana momba an'ity torolàlana ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo amin'ny hevitra.
maty foana ny monitor dia miverina
tsy vita ny famerenana amin'ny laoniny ny rafitra
tsy afaka namorona lesoka fisarahana vaovao izahay
Windows 10 manomboka ny menio ary ny kortana tsy mandeha am-panadinana hadisoana
manomboka menio ao amin'ny windows 10 nijanona tsy miasa